Jiro UV Germicidal, Jiro UV, Jiro Ultraviolet - Kanfur
Jiro UVC 254nm
222nm Jiro UVC lavitra
"Kalitao tsara indrindra, serivisy tsara indrindra" no tanjon'ny orinasanay mandrakariva, Kanfur dia hilalao ny tombotsoan'ny teknolojia manokana hanomezana ny mpanjifa vokatra tsara kalitao, ny vidiny tsara indrindra, ny tambajotra varotra tonga lafatra ary ny serivisy aorian'ny fivarotana ary andramo ny tsara indrindra ataontsika Fahasalamam-bahoaka!
mahalala bebe kokoa momba ny orinasa
Ny fanamainana, famonoana otrikaina, fanesorana fofona hafahafa, dia mitondra fiainana malahelo anao
Jiro UV 35W
Boaty sterilizer UV
uv trolley maivana
Mianara bebe kokoa momba
Kanfur dia mirehareha amin'ny fampidirana ireo Jiro UVC 222nm Far, izay laharan-tariby misy antsika 222nm Far UV-C modules jiro excitter ho an'ny fampiharana fampihenana mikraoba.
Ny jiro UV2 222nm lavitra voadio dia azo ampiasaina soa aman-tsara amin'ny toerana tsy misy olona sy hipetrahana fa tsy misy atahorana ho an'ny olombelona raha ampiasaina ao anatin'ny fetra farany fampiroboroboana natolotry ny American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH®) na ny fitakiana IEC 62471.
Tsy misy manimba ny olombelona sy ny biby, azo antoka kokoa noho ny jiro UVC 254 nm nentim-paharazana
Teknolojia sivana momba ny fiarovana ny fananana dia natao hiantohana ny famoahana tery 222nm
Maimaim-poana Mercury - Sariaka amin'ny tontolo iainana
Ny halavan'ny mikraoba mahomby
Fampihenana ny viriosy, bakteria ary hazondamosina
Suhu miasa malalaka
On / Off eo noho eo eo amin'ny herin'ny famoahana feno
Tsy misy fihenan'ny androm-piainana amin'ny tsingerina matetika / mandeha matetika
Kanfur dia manana tsipika famokarana matihanina miaraka amin'ny teknolojia famokarana sy fanodinana mandroso, ny famokarana isan-taona hatramin'ny 100000 set.
R&D matihanina sy marin-toerana, ekipa famokarana sy varotra, miaraka amina mpiasa 160, dia mampiditra talenta mandroso hatrany ny orinasa.
Nahazo mari-pahaizana momba ny patanty
Miaraka amin'ny ekipa matihanina R&D, ny vokatra rehetra dia mivoatra tsy miankina ary novokarinay, dia nahazo mari-pankasitrahana teknolojia miisa 50 manana ..
Ny varotra anatiny sy ny varotra any ivelany dia ekipa mpivarotra roa, natondrana tany amin'ny firenena maherin'ny 50 manerantany ary ny varotra isan-taona hatramin'ny usd4000000.
About ny orinasa
Tsipika famokarana tsy miankina
taratasy fanamarinana fanomezam-boninahitra
Ny jiro UV dia toa tsara tarehy sy milamina, azoko raha ho an'ny zanako lahy. Izy io koa dia manana ny fanaraha-maso lavitra, izay tena mora ampiasaina. Tena famolavolana mahaolona. Tena traikefa mividy tena tsara.
Haingam-pandeha ny fandefasana DHL, dimy andro monja no nahazoako ny jiroko ultraviolet. Nampiasaiko araka ny torolalana nomeny aho. Mora dia tsotra, miaraka amin'ireo fanamafisam-peo amin'ny vanim-potoana telo, mino aho fa hanome efitrano fandraisam-bahiny ho ahy.
Tena afa-po aho amin'ity jiro UV ity. Fonosina tsara ary alefa haingana. Mora sy haingana ampiasaina amin'ny fanaraha-maso lavitra. Ny efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fandraisam-bahiny, fandroana ary lakozia dia voan'ny otrikaretina avokoa, misaotra
Fanadihadiana momba ny lisitry ny vidiny
Hatramin'ny nananganana azy, ny orinasanay dia namolavola vokatra kilasy voalohany manaraka ny fitsipiky ny kalitao aloha. Ny vokatray dia nahazo laza tsara eo amin'ny sehatry ny asa sy fahatokisana sarobidy eo amin'ireo mpanjifa vaovao sy taloha ..
avy amin'ny adminJan-11-2021
Famonoana otrikaretina amin'ny Far-UV (222 nm Ultraviolet li ...
Topimaso momba ny haitao Far-UV (222 nanometer) sy ny fahaizany mamono otrikaretina. Vokatry ny areti-mandringana COVID-19 dia ny filàna fitomboan'ny filàna toerana malalaka sy azo antoka. Tsy maintsy atao ny mampihena ny risika amin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina, izay nanetsika olona iray lavitrisa erak'izao tontolo izao tao anatin'ny 2 ...
avy amin'ny adminJan-05-2021
Teknolojia Jiro voajanahary
Teknolojia Jiro Germicidal Rehefa mikaroka UVC Germicidal Fixtures ianao dia mety hahita karazana teknolojia sy fanamafisam-peo maro karazana. Ny jiro UVC rehetra dia misy valopy quartz misy mercury sy gazy hafa ary elektroda. Rehefa voadona ny jiro, ny angovo b ...
avy amin'ny admin28 des-20-2020
Ny tombotsoan'ny rafitra famonoana UV-C dia be dia be, ao anatin'izany: Mahomby amin'ny karazana zavamiaina bitika rehetra, ao anatin'izany ny bakteria, viriosy, holatra ary protozoa. sy tontolo iainana f ...